အနုပညာသတင်း Archives - Lupyo News
ဟာသသရုပ်​ဆောင် လူရွှင်​တော် ဦးဧရာ ကွယ်လွန်
December 19, 2020 by Lupyo News
ဟာသသရုပ်​ဆောင် လူရွှင်​တော် ဦးဧရာ ကွယ်လွန် အတည်ပြုလူနာ ဟာသသရုပ်​ဆောင် လူရွှင်​တော် ဦးဧရာ ကွယ်လွန် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးဧရာဟာ နိုဝင်ဘာ(၂၉)ရက်ညကအောက်စီဂျင်ထိုးကျသွားလို့ ရန်ကုန်​ဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ်ပို့ခဲ့ရပြီး နောက်နေ့ စစ်ဆေးချက်အရ Postive အဖြေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ (19.12.2020) နံနက် ၃နာရီ ၃၉ မိနစ်မှာ​တော့ သရုပ်​ဆောင် ဦးဧရာဟာ ကိုဗစ် Positive အတည်ပြု ​ လူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူ​နေရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ေ ကြာင်း သိရပါသည်။ ============= Unicode ဟာသသရုပျဆောငျ လူရှငျတျော ဦးဧရာ ကှယျလှနျ အတညျပွုလူနာ ဟာသသရုပျဆောငျ လူရှငျတျော ဦးဧရာ ကှယျလှနျ ဟာသသရုပျဆောငျ ဦးဧရာဟာ နိုဝငျဘာ(၂၉)ရကျညကအောကျစီဂငျြထိုးကသြှားလို့ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသို့ အရေးပျေါပို့ခဲ့ရပွီး နောကျနေ့ စဈဆေးခကျြအရ Postive … Read more
ကျားပေါက်ကတော့ ဆောင်းဦးလှိုင်ကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ အဝေးကနေ အူမနေပဲ သူ့ဆီလာခဲ့တဲ့
November 1, 2020 by Lupyo News
ကျားပေါက်ကတော့ ဆောင်းဦးလှိုင်ကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ အဝေးကနေ အူမနေပဲ သူ့ဆီလာခဲ့တဲ့ ကျားပေါက်ရေးထားတဲ့ အပြည့်အစုံ Friend request လဲလက်မခံ။ msger ကပြောတော့လဲ block ပြေးလို့ အစကနှစ်ယောက်ထဲအေးဆေးရှင်းမလို့ဟာ အခုဒီကနေပဲ unilaterally attack လုပ်လိုက်တယ်ဟေ့ရောင်။ ၁။ (တခါမှ နိုင်ငံရေးမပြောသူတွေ တအားပြောတယ်)ပြောတော့ lee ဖြစ်လား။ဘယ်အချိန်ဘယ်သူပြောပြောမင်းစောက်လုပ်လား။ မင်းပြောမှနိုင်ငံရေးလား။ ၂။ တခါမှအနီအတွက်သီချင်းမရေးမဆို ဖူးရအောင် အန်တီစုခြံထဲမှာချိန်းပြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့အခွေမှာ မင်းရောငါရောမပါဘူးလား။ ပဲခူးအောင်နိုင်ရေးပွဲ ငါစင်ပေါ်ကဘာပြောခဲ့လဲ video တွေရှိရင်ရှာကြည့်။ ၃။ မင်းရောဝန်ကြီးဌာနပွဲတွေမဆိုခဲ့ဘူးလား။ ငါ့ political ခံယူချက်ကြောင့်ပဲ ငါ့ band ကဘာအလုပ်မှမလုပ်ရတော့ဘူးလား။ ကြောက်ခေတ်က ငါ့နံမည်နဲ့ထွက်တာ။ Bigbag နဲ့မဟုတ်ဘူး ၄။ နီချင်ယောင်ဆောင်တော့ငါဘာရလဲ။ artist တွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ law တစ်ခုလောက်တင်သွင်းပေးရင်ကျနော်ဆိုမယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့တာ။ ပိုက်ဆံတပြားမှမယူဘူး။ … Read more
ယနေ့ MRTV4အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုဇင်မောင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်
October 31, 2020 by Lupyo News
ယနေ့ MRTV4အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုဇင်မောင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုဇင်မောင်(MRTV-4, Channel-7, Forever Group) သည် ယနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် နံနက်အစောပိုင်း ၃ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မိသားစုနှင့်ထပ်တူစိတ်မကောင်း ဝမ်းနည်းရပါသည်😪 ကိုဇင်မောင် ကောင်းရာဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိပါစေ🙏🙏🙏😪 ကိုဇင်မောင် ဆုံးပါးသွားသည့်အပေါ် လုပ်ငန်းခွင် မိတ်ဆွေ/သူငယ်ချင်းများမှလည်း မယုံနိုင်ဖြစ်၍ ဝမ်းနည်းကြောင်းဆုတောင်းစာများ ယခုလိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ #ZinMaung ============ unicode အစီအစဉျတငျဆကျသူ ကိုဇငျမောငျ(MRTV-4, Channel-7, Forever Group) သညျ ယနေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ အောကျတိုဘာလ ၃၁ ရကျ နံနကျအစောပိုငျး ၃ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ ရနျကုနျဆေးရုံကွီး၌ ကှယျလှနျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ မိသားစုနှငျ့ထပျတူစိတျမကောငျး ဝမျးနညျးရပါသညျ😪 … Read more
ဂျပန်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကတောင် လေးစားသွားရတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
October 29, 2020 by Lupyo News
ဂျပန်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကတောင် လေးစားသွားရတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ငွေမဲ ကို နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးစစ်တမ်း စံနှုန်းတွေက ရှာမတွေ့နိုင်။ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ဂျပန်ကြီးက ပြောတယ်.. မင်းတို့မြန်မာပြည်ကို ရွှေနိင်ငံ ရွှေနိင်ငံ ဆိုပြီ ခေါ်ကြတာ အခု ကိုဗစ်ကာလမှာ သဘောပေါက်လာပြီ ပြောပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပြန်မေးတာပေါ့ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုပြီ.. သူကပြောပါတယ်. ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိင်ငံတကာမှာ စီးပွါးရေးတွေ ကျပြီ နယ်ပယ်အသီးသီးကလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဒုက္ခရောက်ရပြီ ဝန်ထမ်းတွေလည်း အလုပ်ပြုပ်ပြီ ဒုက္ခရောက် ခက်ခဲနေကြရပါတယ်.ဂျပန်မှာ ဆိုလည်း နှစ်ပေါင်းရာချီ ရာဇဝင်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေတောင် ပြိုလဲပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာတွေ မနည်းဘူးလို့ ပြောပါတယ်. ကမ္ဘာ့နိင်ငံကြီး များစွာက အစိုးရအသီးသီးကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ မပြိုလဲရေး အလုပ်အကိုင်မဆုံးရှုံးရေးအတွက် အဖက်ဖက်က ထောက်ပန့်ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကြားက … Read more
ကြော်ငြာဘုရင်အမဖြစ် တစ်ကျော့ပြန်အောင်မြင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးအပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ရန်အောင်
October 28, 2020 by Lupyo News
ကြော်ငြာဘုရင်အမဖြစ် တစ်ကျော့ပြန်အောင်မြင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးအပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ရန်အောင် အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် နာမည်တစ်လုံးနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် ရန်အောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲနေရာပေးထားခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရန်လေးလို့အများက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကိုရန်အောင်ကတော့အခုဆိုရင် ကားရိုက်တွေနားထားပေမယ့် အလှူအတန်းတွေကိုတော့ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ကိုရန်လေးကတော့ အခုကာလအတောအတွင်းမှာဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း Live လွှင့်ပြီး ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူးလေးကတော့ ကိုရန်လေးက မိမိကဲ့သို့ ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကို အွန်လိုင်းမှာ Live လွှင့်ရောင်းချနေတဲ့ တစ်ချိန်က ကြော်ငြာဘုရင်မ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့တကျော့ပြန်အောင်မြင်မှု ရရှိလာတဲ့အပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပဲ ပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရန်လေးအနေနဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ ထက်ထက်တစ်ယောက် အွန်လိုင်း Live လွှင့်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကို ရောင်းချပေးနေတာကို မြင်ရတဲ့အခါ … Read more
ဆိုရှယ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်…
ဆိုရှယ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်… မင်းသမီးချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး မိဘအမွေတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မပြတ်ပြုလုပ်နေသူပါ။သူမဟာ ”ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်ဝင်စားခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မမဆောင်းက ဆီလီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပါ။ “မမဆောင်းကအရမ်းရှက်တတ်တယ်၊ ဆီလီကွန်တွေဘာတွေတော့မထည့်ဖြစ်ဘူး၊ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တာတွေဆိုရင် ရှောင်ပါတယ် ဆေးရုံလည်းမတက်ရဲဘူးလေ ဘောင်းဘီနှစ်ထပ်တွေဘာတွေလောက်ပဲ ဝတ်ဖြစ်တာပါ။ သူများတွေအရမ်းလှနေရင်အားကျတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သတ္တိကတော့လုံးဝမရှိဘူး၊ လိုင်းပေါ်မှာ တင်ပါးပို့စ်Selectionတွေလုပ်ပြီးစကြတယ်”ဆိုလာခဲ့တာပါ။ ဆက်လက်ပြီးမမဆောင်းက “မော်လမြိုင်သူမို့ကိုယ်လုံးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာမို့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့စတာပဲသဘောထားပါတယ် ဘယ်လိုမှလည်းစိတ်မရှိပါဘူး သူတို့ Troll တဲ့သူတွေကြောင့် မမဆောင်းဆိုပြီးချစ်တဲ့သူတွေလည်းများလာတဲ့အတွက် အဲ့လိုစနေတဲ့ ပရိသတ်တွေတိုင်းကို မမဆောင်းက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် … Read more
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ စိန်ရောင်းရင် မဲဖောက်တာအပေါ် မရိုးသားဖူးလို့ ဝေဖန်သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဇေရဲထက်
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ စိန်ရောင်းရင် မဲဖောက်တာအပေါ် မရိုးသားဖူးလို့ ဝေဖန်သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဇေရဲထက် လတ်တလောမှာ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး ထက်ထက်မိုးဦးဟာ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို Live လွင့်ပြီး ရောင်ချပေးနေတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Live ကတော့ ကြည့်ရှူသူအများဆုံးနဲ့ ဝယ်ယူ သူ များ အများဆုံး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်နေ့ လွင့်ခဲ့တဲ့ စိန်ရောင်းတဲ့ Live မှာတော့ ဝယ်ယူသူတွေကို I Pad တစ်လုံး မဲဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီမဲေ ဖာက်မှု အေ ပါ် မှာေ တာ့ မရိုးသားဖူးဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော ဇေရဲထက်ဟာ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ စိန်ရောင်းရင် မဲဖောက်တာအပေါ် မရိုးသားဖူးလို့ ဝေဖန်သူတွေကို “ကံစမ်းမဲ့ပေါက်ချင်လို့ ဝယ်တာ ဟုတ် သလို ထက်ကိုချစ်လို့အားပေးတာ i … Read more
မောင်နှမဆိုတာမရှိဘူး နာမည်တောင်မကြားချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့အကိုရင်း ထက်နိုင်အောင်
October 26, 2020 by Lupyo News
မောင်နှမဆိုတာမရှိဘူး နာမည်တောင်မကြားချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့အကိုရင်း ထက်နိုင်အောင် မောင်နှမကအစပဲ လူတွေများ မရှိခိုးနိုး မလှစုန်းမျိူး ဆက်ဆံချင်ကြတာ fri တွေအားလုံးကို ချစ်လို့ ခင်လို့ ပြောပြချင်တာ။ ကိုဗစ်ကြီးပီးလို့ မသေခဲ့ဘူးဆိုယင်တော့ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံချမ်းသာအောင် လူတန်းစေ့နေနိူင်အောင် အလုပ်ကိုကြိုးစားကြပါဗျာ။ ကျူပ်တော့ ဘဝနဲ့ရင်းပီးသိခဲ့ရပီ ခုချိန်မိဘမောင်နှမ ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အားလုံးတခန်းရပ်သွားခဲ့ပီ အဓိက ကငွေပဲ လောကကြီးက မျက်နှာကြီးရာကို ဟင်းဖတ်ပါကြတယ်။ နာမည်မကြီးဘူး ငွေမရှိဘူးဆိုယင် ခင်ဗျားဟာခင်ဗျားဘာအနုပညာစိတ်ကြီးရှိရှိ ဘယ်လောက်ကြီးဝမ်းစာ ပြည့်ပြည့် ဘယ်လောက်ပဲတော်တော် အလကားပဲ။ လူတွေကအထူးသဖြင့် ကျူပ်တို့နိူင်ငံက ငပိန်းတွေက ဘာမှမသိပဲ အကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး များသောအားဖြင့် ဘုမသိဘမသိဝင်ဆဲ ဘုမသိဘမသိဝင်ပြောနဲ့ သူများအတွင်းရေးမိသားစုမောင်နှမမိဘလင်မယားအကြောင်းကိုခရေစေ့တွင်းကြမသိကြပဲနဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပီး ဝင်ဟောင်ကြရေးကြ ကဲ့ရဲ့ကြ နဲ့အကုသိုလ်အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်တွေ ယူနေကြတယ်။ တကယ်သိတဲ့သူက ဘာမှမပြောချင်လို့ကို ကန့်လန့် ကာနောက်ကွယ်ကနေ ပြုံးပီးထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ် … Read more
တင်းခါနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကြီးတွေနဲ့ ရေချိုးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယို
တင်းခါနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကြီးတွေနဲ့ ရေချိုးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက်တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယို ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မေပန်းချီက တော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ်ရင့် ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆို င်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေ ထဲ က တစ်လ က်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေခေ တ်စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာ လည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေ ကိုရ ရှိခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ပို င်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာအ ရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင် သူတစ်ယောက် လည်းဖြစ် ပါတယ်နော်။ အရမ်းမိုက် တဲ့ … Read more
ဦးကျော်သူကို ကိုဗစ်ရှိမရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးရာ NEGATIVE အဖြေထွက် ဦးကျော်သူကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဝေဘာဂီ မှာ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ကတည်းက ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဆေးစစ်ချက်အဖြေဟာ Negative အဖြေ ထွက်လာပြီလို့ ဝမ်းသာ အားရ ပြောပြလာပါတယ်။ ” N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး “N” ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့ ၊ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလိုဖြစ်ကုန်မယ်။ သတိ! အသိ! အမြဲ ရှိ! ကျော်သူ( ခေတ္တ … Read more